Faahfaahino Laga Helayo Qaraxa Ka Dhacay Magaalada Jiddah. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Qaraxa Ka Dhacay Magaalada Jiddah.
Ruux soo xirtay Suun ay ka buuxaan walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay meel ku dhowÂ Qunsuliyadda ay Dowladda Saliibiyada ee Mareykanku ku leedahay magaalada Jiddah ee Dalka Sacuudiga.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Dowladda daba dhilifka ee Sacuudiga ayaa ku warrantay in qaraxaasi uu ku dhaawacmay ugu yaraan hal Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Ammaanka.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda ayaa sheegay in ruuxa bam isku soo xiray uu labadii habeenimo ee xalay isku qarxiyay halka ay iska galaan Waddada lagu magaacaabo Shaaric Filastiin iyo Shaaric Xaaâ€™il ee magaalada Jiddah, waxaana qaraxa uu dhacay markii Ciidamada Amnigu ay isku dayeen inay qabtaan Ninkaasi.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda arrimaha gudaha ee Dowlada daba dhilifka Sacuudiga ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Booliiska ee ka agdhawaa Qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Jiddah ay ka shakiyeen ruuxa is qarxiyay markii uu kusoo dhawaaday goob ay Ciidamadu joogeen, iyadoona uu qaraxa uu fuliyay markii lagu amray inuu istaago si loobaaro.
Goob jooge ayaa u sheegay Wakaaladda wararka ee Reuters in Saacad kadib Qaraxaas uu maqlay Seddax qarax kale oo xooggan oo ka dhacay meel ku dhow Qunsuliyada, iyadoona illaa iyo hadda aan si rasmi ah loo sheegin waxa ay qaraxyadaasi ahaayeen.
Dhinaca kalena Afhayeen u hadlay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay qaraxyada ka dhacay meel u dhow Qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Jidda, isagoona tilmaamay inaysan jirin wax khasaare ah oo qaraxyadaasi kasoo gaaray Shaqaalaha Qunsuliyadda.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 29-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 29-09-1437 Hijri.